यसरी बनाउनुस् लोभलाग्दो फि’गर ताकि,हिड्ने मान्छे टक्क रोकिएरै हेर्नेछन तपाईलाई! | सुदुरपश्चिम खबर
यसरी बनाउनुस् लोभलाग्दो फि’गर ताकि,हिड्ने मान्छे टक्क रोकिएरै हेर्नेछन तपाईलाई!
यो कुरामा कुनै दुई मत नै छैन कि हामीहरु कतै हिड्दा डुल्दा धुम्ने क्रममा टक्क एकैछिन रोकिएर हामितिर हेरोस र वाणी अर्थात मुखले हाम्रो फि’गर को बारेमा २र४ शब्दले प्रसंशा गरीदियोस् । यदि तपाईहरुले यस्तो मिठो कल्पना गरिबस्नुभएको छ भने अब कल्पना र सपना मा मात्र रम्ने दिन गए ।
किनकि हामीले कल्पनाअनुरुपनै त्यस्तो फि’गर बनाउन सक्छौ र फि’गर राम्रो होस् भन्ने कसको चाह हुँदैन र ? यसका लागि मानिसहरू व्यायाम, योग र अन्य धेरै उपाय अपनाउँछन् । तर सबैले पर्फेक्ट शेप पाउन सक्दैनन् । हदभन्दा बढी डाइटिङ वा व्यायाम पनि शरीरका लागि हानिकारक हुन्छ ।
यहाँ हामी केही यस्ता टिप्स बताउँदैछौं जसले तपाईंको शरीरलाई पर्फेक्ट बनाइदिन्छ । १(बिहान उठेर सबभन्दम पहिले मनतातो पानी पिउने बानी बनाउनुस् ।
२(व्यायाम गरेपछि स्वस्थ ब्रेकफास्ट लिनुस् जसमा प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट र मिनरलहरू हुन् । ३(लन्चमा सूप पिउनुस् र खाना खानुभन्दा कम्तीमा एक घन्टाअघि र पछि पानी पिउनुस्
४(सफ्ट ड्रिंकले क्यालोरी बढाउँछ । यसको सेवन नगर्नुस् । ५(बीचबीचमा यसो चना वा काजुबदाम खानुस् । यसले गर्दा कम भोक लाग्छ । ६(अत्यधिक पानी पिउनुस् । स्वास्थ्यका लागि पानी राम्रो पदार्थ हो । ७(टीभी हेर्दै वा गफ गर्दै खाना नखानुस् । ८(आहारमा फलफूल पनि समावेश गर्नुस् । यसबाट शरीरले आवश्यक न्युट्रिएन्ट पाउँछ
९(धेरै मसला भएका वा प्याकेटमा राखिएका खानेकुरा नखानुस् । सकेसम्म बाहिरको खाना नखानुस् । १०(दिनमा एकचोटि ग्रीन टी पिउनुस् । यसमा भएको एन्टीअक्सिडेन्टले शरीरलाई लाभ दिन्छ । आज नेपाल बाट सभार